रवि लामिछानेले खोले नयाँ टेलिभिजन, रमेश प्रशाई, दिपकराज गिरि, इन्दिरा जोशी लगाएत यी चर्चित ब्याक्तिले चलाउने छन् यी कार्यक्रम (भिडियोसहित) – Namaste Host
रवि लामिछानेले खोले नयाँ टेलिभिजन, रमेश प्रशाई, दिपकराज गिरि, इन्दिरा जोशी लगाएत यी चर्चित ब्याक्तिले चलाउने छन् यी कार्यक्रम (भिडियोसहित)
February 23, 2021 February 23, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on रवि लामिछानेले खोले नयाँ टेलिभिजन, रमेश प्रशाई, दिपकराज गिरि, इन्दिरा जोशी लगाएत यी चर्चित ब्याक्तिले चलाउने छन् यी कार्यक्रम (भिडियोसहित)
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलगायतको संलग्नतामा नयाँ टेलिभिजन सञ्चालनमा आउने भएको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछानेले ‘ग्यालेक्सी फोरके’ टेलिभिजन च्यानल शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन् ।
सो टेलिभिजन नेपालमै पहिलो फोरके प्रविधिमा आधारित भएको लामिछानेले जानकारी दिए ।
उद्घाटन समारोहमा लामिछानेले टेलिभिजनले आम सर्वसाधारणको हेडलाइन बनाउनुका साथै भरपूर मनोरञ्जन पनि दिने बताए ।
‘जतिपनि आम सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, जसको मुद्दा ओझेलमा पर्यो ती सर्वसाधारणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना न्यूज र हेडलाइन बनाउँछौं’, लामिछानेले भने ।
टेलिभिजनको अध्यक्षमा डीबी राई रहेका छन् भने उपाध्यक्ष छविलाल बञ्जाडे र प्रबन्ध निर्देशकमा स्वयम् रवि लामिछाने रहेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै नयाँ टेलिभिजन ग्यालेक्सी को ओपिनिङ गरिएको छ । सोही कार्यक्रममा टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गराइएको छ ।
न्यूज २४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम छाडेका लामिछानेले नयाँ कार्यक्रम ‘कामका कुरा’ सञ्चालनमा ल्याउने भएका हुन् ।
यस्तै कार्यक्रममार्फत अन्य राजेश हमाल, रमेश प्रसाई, ईन्दिरा जोशी लगायत कलाकारहरु नयाँ कार्यक्रमको घोषणा पनि गरेका छन् ।
अब नयाँ टेलिभिजन ग्यालेक्सी फोके मा ईन्दिरा जोशी र काली बास्कोटाले ‘लिटिल च्याम्पियन’, दिपकराज गिरीले ‘क्रा इम पे ट्रोल नेपाल’, पब्लिक स्पिकर रमेश प्रसाईले ‘लाल मोहर’, राजेश हमालले ‘को बन्छ करोडपति’ लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
तस्विर र भिडियो तल हेर्नुहोस
इतिहास रच्दै रबि लामिछानेले यसरी धुमधामसँग नयाँ टिभी खोले । ‘सिधा कुरा’ आउँछ कि आउँदैन ? (भिडियो हेर्नुस)
मेडिसिटी अस्पतालले भन्यो : जटिल नयाँ बिरामी भर्ना लिन सक्दैनौं
त्यसपछि श्रीमानलाइ रुखमा बाँ’धेर श्रीमती र दिदि सासूलाई …….!